फोर्स मोटर्सले नयाँ गोर्खा एसयूभी छिटै लन्चिङ हुँदै, जा्न्नुहोस् यस्ता छन् विशेषता ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
फोर्स मोटर्सले नयाँ गोर्खा एसयूभी छिटै लन्चिङ हुँदै, जा्न्नुहोस् यस्ता छन् विशेषता !
६ असार २०७८, आईतबार ००:००
फोर्स मोटर्सले न्यु जेनेरेसन अफ रोडर एसयूभी गोर्खाको लन्चिङ समय पहिलो पटक स्पष्ट गरेको छ ।
हालै फोर्स गोर्खा एसयूभीको न्यू जेनेरेसन मोडलको फोटो इन्टरनेटमा लिक भएको थियो । कम्पनीले सो कार जुलाई र सेप्टेम्बरमा लन्च गर्ने सम्भावना रहेको छ । लन्चिङ पछि सो कारको महिन्दा थारसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
फोर्स मोटर्सले २०२० को अटो एक्सपोमा नयाँ गोर्खा बीएस ६ सार्वजनिक गरेको थियो । कोभिड–१९ को कारणले गर्दा सो कारको लन्चिङ समय केही समयको लागि सारिएको थियो ।
महिन्द्रा थार भारतमा निकै चर्चित रहेको छ । महिन्द्रा थारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नयाँ गोर्खा एसयूभीको लुक र डिजाइनमा कैयौ परिवर्तन गरिएको छ ।
नयाँ फोर्स गोर्खा बीएस६ एसयूभीमा २.६ लिटर डिजेल इन्जिन समावेश गरिएको छ । जसले ८९ बीएचपीको पावर जेनेरेट गर्छ । यसमा ५ स्पिड म्यानुअल गियरबक्स समावेश गरिएको छ । सो कारमा अल ह्वील ड्राइभ सिस्टम उपलब्ध हुनेछ । सो एसयूभी दमदार अफ रोडर हुनेछ र यसमा फोर बाई फोर सिस्टमको साथ अफरोडिङ टायर उपलब्ध हुनेछ ।
नयाँ फोर्स गोर्खाको डिजाइन र लुक अटो एक्सपो २०२० मा सार्वजनिक गरिएको गोर्खा जस्तो देखिन्छ । यसको अटो एक्सपोमा प्रदर्शन गरिएको जस्तो फेन्डर माउन्टेड इन्डिकेटर्स, सर्कुलर एलईडी डिआरएल, सिंगल स्लेट ग्रिल, स्नोर्कल, फाइव स्पोक अलोय ह्वीलको साथमा रुफ माउन्टेड लगेज क्यारियर समावेश गरिएको छ ।
नयाँ गोर्खामा नयाँ हेडल्याम्पको साथै सर्कुलर डे टाइम रनिङ लाइटको साथै सिंगल स्लट ग्रिलको बीचमा कम्पनीको लोगो समावेश गरिएको छ ।
कम्पनीले सो कारमा डबल हाइड्रोलिक स्प्रिङ क्वाइल सस्पेन्सन र १७ इन्चको ट्युबलेस टायर समावेश गरेको छ । कारमा नयाँ टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, दुई एयरब्याग, एबीएस, रियर पार्किङ सेन्सर, पावर विन्डो, डिआरएलको साथमा एलईडी हेडल्याम्प जस्ता फिचर समावेश गरिएको छ । साथै यसमा म्यानुअल लकिङ डिफ्रेन्सियलको साथमा नयाँ च्यासिस पनि उपलब्ध रहेको छ ।
सो एसयूभीमा एन्टि लक ब्रेकिङ सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रिब्युसन, डुअल एयरब्याग, पार्किङ सेन्सर, स्पिड अलर्ट जस्तो सेफ्टी फिचर रहेको छ ।
मिडिया रिपोर्ट अनुसार नयाँ गोर्खा बीएस६ एसयूभी १० देखि १५ लाख भारुमा लन्च गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल अटो
प्रकाशित मिति: Jun 20, 2021
रेनो काइगर र निसान म्याग्नाइट कार : पावर र पर्फमेन्स एउटै तर मूल्यमा १ लाख ५० हजार अन्तर!
कम मूल्यको एसयूभीका रुपमा चर्चा कमाइरहेको निसान म्याग्नाइटलाई चुनौती दिनेगरी रेनो काइगर अझ कम मूल्यमै
फोर्ड फिगो नयाँ इन्जिन र अटोमेटिक गियरबक्सको साथमा चाँडै लन्च हुँदै
नयाँ इन्जिन र अटोमेटिक गियरबक्सको साथमा फोर्ड फिगो चाँडै लन्च हुँदै छ । हाल कम्पनीले
असार ३१ गते नेपाली बजारमा रेनो काइगर सार्वजनिक हुने, जान्नुहोस् यस्ता छन् विशेषता !
नेपाली बजारमा रेनो काइगर असार ३१ गते बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ । रेनोको नेपालका
मारुतीको वागन आरको इलेक्ट्रिक कार लन्च हुँदै, यस्ता छन् विशेषता !
भारतीय बजारमा मारुती सुजुकीले नयाँ मोडलको कार लन्च गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीले
बेनेलीको नयाँ बाइक १८०एसको बुकिङ खुल्यो, केही दिनमै डेलिभरी गरिने !
नेपाली बजारमा बेनेलीको नयाँ बाइक १८० एस उपलब्ध हुने भएको छ । बेनेलीको नेपालका लागि
निसान लिफ इलेक्ट्रिक कार नेपालमा भोलि भर्चुअल लन्च हुँदै, मूल्य कति ?
विश्वमै लोकप्रिय मानिने निसानको इलेक्ट्रिक कार नेपाली बजारमा भोली लन्च हुँदै छ । निसानको नेपालका